के कोरोनाभाइरसको बेला एसईओमा लगानी गर्नु बुद्धिमानी हो? Semalt जवाफ थाहा छ
के कोरोनाभाइरसको बेला एसईओमा लगानी गर्नु बुद्धिमानी हो? Semalt जवाफ जान्छ
जब सम्म तपाईं ' विगत केही महिनादेखि चट्टानमुनि बसिरहनु भएको छ, तपाईंलाई सायद सचेत छ कि २०२० कोरोनाभाइरस महामारीको वर्ष भएको छ।
मात्र होइन संकट देशहरूलाई राष्ट्रिय लकडाउनमा बाध्य पार्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा लगभग पूर्ण रूपमा रोकिन्छ। यो हामी पनी गम्भीर स्वास्थ्य असर र महामारीको चल जोखिममा पुग्नु भन्दा पहिले हो।
तर यसको SEO संग के गर्नु पर्छ? ठीक छ, वास्तवमा धेरै धेरै।
कोरोनाभाइरस महामारीको मापनका कारण धेरै कम्पनीहरूले उनीहरूको व्यवसायलाई अनलाइन सार्दै आएका छन्। प्राय: पहिलो पटक।
यो सँगै मिल्दोजुल्दो छ मानिसहरुका घरहरुमा सीमित हुनु र टाढाको कामलाई अँगाल्ने। साथै, प्राय: पहिलो पटक।
नतिजाको रूपमा, इन्टरनेटको उपयोगको स्तर आकास्यो। र यो त्यस्तै रहनको लागि अपेक्षा गरिएको छ किनकि धेरै कम्पनीहरू अनलाइन व्यवसायमा विकसित हुन्छन् र घरबाट कामका लागि स्टाफको लागि दीर्घकालीन विकल्प बनाउँदछ।
वर्षौ पछि विज्ञहरूले भविष्यवाणी गरेका -कमर्स र डिजिटलाइजेसन अन्ततः ईंटहरू र मोर्टार व्यवसायबाट लिन्छ, यो भइरहेको देखिन्छ। लगभग राति।
यसको मतलव अनलाइन विश्व अझ बढी भीड हुनेवाला छ, यसलाई पहिलेभन्दा अझ बढी डिजिटल मार्केटिंग र एसईओ मा लगानी गर्न महत्वपूर्ण बनाउँदै।
कोरोनाभाइरस र एसईओ
ई-वाणिज्य र अनलाइन व्यवसायहरूले कोरोनाभाइरस अघि स्थिर स्थिर वृद्धिको मजा लिइरहेका थिए। तर महामारीको कारण मानिस शपिंग र व्यवसाय अनलाइन सञ्चालनमा बृद्धि भएको छ।
त्यसोभए, यदि तपाईंसँग अनलाइन व्यवसाय छ तर तपाईंलाई SEOको बारेमा धेरै थाहा छैन भने, केहि SEO उपकरणहरूमा लगानी गर्न यो राम्रो समय हो।
हो, जे भए पनि मन्दीले हाम्रो बाटोको लागि आशा गर्यो।
मानिस आर्थिक संकटको बारेमा कुरा गर्न थाल्ने बित्तिकै, यो गर्न सक्दछ तपाईंको टाउको बालुवामा राख्ने प्रलोभनमा पर्नुहोस् र यसको बहाइको लागि कुर्नुहोस्। तर व्यवसाय र ब्रान्ड जुन संकटको समयमा बाँच्दछन् ती नै दृश्यात्मक रहन्छ।
SEO ले व्यवसायलाई देखिन रहन मद्दत गर्न सक्छ र नयाँ ग्राहकहरुलाई पनि तपाइँको तरिका पठाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।
कसरी? यो सुनिश्चित गरेर कि तपाइँको वेबसाइट टिप-टप सर्तमा छ र गुगल जस्ता खोज ईन्जिनहरूले पत्ता लगाउन अनुकूलित छ।
एसईओ के गर्न सक्दछ?
यदि तपाईलाई पहिल्यै थाहा छैन भने, SEO खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसनको लागि खडा छ।
यसको मतलव यसको चयन हो। उपकरण र टेकनीकहरू एक वेबसाइटमा रोल आउट गरिएको छ जसले गर्दा खोज इन्जिनहरूले यसलाई इन्टरनेटको विशाल विश्वमा फेला पार्न सक्दछन्।
अनलाइन उपलब्ध धेरै सामग्रीको साथ, यो ब्लग, ल्यान्डि page पृष्ठ वा सम्पूर्ण वेबसाइटको लागि भीडमा हराउन सजिलो हुन सक्छ। तर अधिक सामग्री खोज ईन्जिन एल्गोरिथ्मको लागि अनुकूलित छ, अधिक प्रतिस्पर्धी हुन्छ। त्यो पछि जब वेबसाइटमा परिणामहरू माथि माथि देखा पर्न थाल्छ।
सरल, ठीक छ?
< div> यो हुनुपर्दछ, तर खोज इञ्जिनहरूले नियमित रूपमा तिनीहरूको एल्गोरिदम परिवर्तन गर्दछ। त्यसोभए, गत वर्ष के काम गरे, वा यस बर्षको शुरुमा पनि, अब काम नगर्न सक्छ।
यद्यपि त्यहाँ केहि प्रविधिहरू छन् जुन समयको परीक्षा हुन्, र एउटा ती मध्ये प्रासंगिक कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोग हो।
उदाहरण को लागी, चकलेट को लागी खोज्ने कोही गुगल मा टाइप गर्न सक्दछ, "उत्तम दुध चकलेट" वा "स्वतन्त्र चकलेट निर्माता"। यदि ती शब्दहरू तपाइँको वेबसाइट सामग्रीमा सहि सुविधाहरूमा चित्रित छन् भने, गुगलले तपाइँको साइट फेला पार्नेछ र परिणामहरूको बीचमा यसलाई क्रमबद्ध गर्नेछ।
अझै पनि, कुञ्जी शब्दहरू एक्लो ग्यारेन्टी हुन् शीर्ष स्पॉटहरूमा हिर्काउने। त्यसो भए तपाईले मेटा ट्यागहरू, हेडलाइन्स र छविहरू अनुकूलन गर्ने, लि building्क निर्माण गर्ने र अद्वितीय सामग्री सिर्जना गर्ने बारे सोच्न आवश्यक छ।
त्यहाँ पेशेवरहरूको साथ काम आउँदछ।
SEO र डिजिटल मार्केटिंग विज्ञहरू व्यवसाय वेबसाइटहरूको प्रोफाइल बढाउनमा कुशल छन्। र यस्तै समयमा, विशेषज्ञतामा लगानीले लामो यात्रा गर्न सक्दछ।
Semalt त्यस्तै कम्पनी हो जसले तपाईंको वेबसाइटलाई जानकारी गराउन मद्दत गर्न सक्छ।
Semalt र SEO
यदि तपाईं Semalt सँग पहिल्यै परिचित हुनुहुन्न भने, यहाँ छिटो परिचय हो।
Semalt एक पूर्ण स्ट्याक डिजिटल एजेन्सी है जो किभ, युक्रेनमा आधारित छ। योसँग १०० भन्दा बढी रचनात्मक आईटी र मार्केटिंग पेशेवरहरू छन् - साथै पाल्तु टर्टल टर्बो - र विश्वभरका ग्राहकहरूसँग काम गर्दछ।
Semalt मा मुख्य सेवाहरू। एसईओ पदोन्नति, वेब विकास, उन्नत एनालिटिक्स, र व्याख्याकर्ता भिडियो उत्पादन हो।
डिजिटल टेक्नोलोजीमा जडित पृष्ठभूमिको साथ, Semalt वर्षौं देखि अद्वितीय एसईओ समाधानहरू सिर्जना गर्दैछ। गुगल खोजी परिणामहरूको शीर्षमा ग्राहकहरू प्राप्त गर्न।
र, जसले इन्टरनेट प्रयोग गर्दछ कसैले तपाईंलाई भन्नेछ, शीर्ष स्थान त्यो हो जहाँ सबै कम्पनीहरू बन्न चाहन्छ।
किन? किनभने शीर्ष स्थानमा देखा पर्दा वेब यातायातलाई मात्र बढावा दिईन्छ र दृश्यता बढाउँछ, तर अन्तत: यसले अधिक ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्दछ।
यसै कारणले एसईओ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। सम्भावित मन्दीको सामना गर्नुपर्दा पनि।
अझै पनी विश्वस्त हुनुहुन्छ? Semalt सफलताको कहानी हेरौं।
बढ्दो जैविक ट्राफिक
फ्रान्चाइजीहरू खोज्दै र खरीद गर्दै आफ्नो वेबसाइटमा जैविक यातायात बढाउन चाहान्छ।
व्यापार प्रतिस्पर्धी को आलाका रूपमा संचालित भएकोले, यो मतलब प्रति क्लिक भुक्तान (पीपीसी) अभियानहरू चलाउन महँगो थियो। त्यसकारण ब्यापार मालिकले अधिक सवारी ट्राफिक उत्पादन गर्न सस्तो तरीकाको लागि SEO मा परिणत गर्‍यो।
Semalt सँग नौ महिना पछि, यी नतिजाहरू थिए:
जैविक यातायात 3०3 प्रतिशतले बढ्यो
,,782२ कीवर्ड शीर्ष -११ मा
प्रति महिना भ्रमण २,१44
Semalt कसरी गरे?
टीमले वेबसाइटको पृष्ठस्पेड प्रदर्शन जस्ता प्राविधिक त्रुटिहरू फिक्स गरेर र अप-टु-डेट साइटम्याप उत्पन्न गरेर सुरु गर्‍यो। । छविहरू पनि Alt ट्यागमा कुञ्जीशब्दहरूको साथ अप्टिमाइज गरिएको थियो।
अर्को, Semalt ले फ्रान्चाइजीका प्रकारहरूसँग सम्बन्धित कुञ्जीशब्दहरूको चयनसँग प .्क्तिबद्ध गर्न लि link्क निर्माण अभियानबाट शुरू गर्‍यो। यो वेबसाईट गुगल शीर्ष -१० मा दर्जा प्राप्त गर्दछ, एक माध्यमिक अनुकूलित अभियानको साथ जुन अत्यधिक प्रतिस्पर्धी गुगल टॉप5स्थानमा पुग्यो।
परिणामको रूपमा, ग्राहक अब फ्रान्चाइजी ट्रेडिंग उद्योगमा एक अग्रणी कम्पनी हो। Semalt को साथ एक वर्ष भन्दा कम पछि प्रभावशाली परिणामहरू।
एसईओको साथ सुरू गर्नु
Semalt मा, SEO को साथ सुरू गर्ने दुई तरिकाहरू छन् - AutoSEO र FullSEO।
आउनुहोस् एक नजर हेर्नुहोस् जुन तपाईले प्रत्येक समाधानको साथ के पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने पत्ता लगाउन को लागी तपाईलाई के उपयुक्त छ।
साना व्यवसायहरू जुन साइट ट्राफिक बढाउन चाहान्छन्, AutoSEO एक सुरूवात विन्दु हो।
हुनसक्छ तपाई ठूलो लगानी गर्न तयार हुनुहुन्न। वा तपाईं पहिले केही ठोस परिणामहरू हेर्न चाहनुहुन्छ? त्यसो भए AutoSEO एसईओ नमूना गर्न एक सस्तो तरीका हो, विशेष गरी शुरुआतीहरूको लागि।
सेवा वेबसाइटको हालको स्थितिको रिपोर्टको साथ सुरू हुन्छ। यसपछि त्रुटिहरू पत्ता लगाउन र गर्न पर्ने सुधारहरू पहिचान गर्नका लागि एक एसईओ विज्ञ द्वारा पूर्ण विश्लेषण पछि गरिन्छ।
अर्को, एक एसईओ ईन्जिनियरले प्रासंगिक यातायात उत्पन्न कुञ्जी शव्दहरू छान्छ। त्यसपछि Semalt को टेक्नोलोजीले डोमेन-युग र गुगल ट्रष्ट रैंक अनुसार छनौट गरिएको साइटहरूको साथ, आला सम्बन्धित वेब स्रोतहरूसँग लिंकहरू निर्माण गर्न सुरू गर्दछ।
एक पटक उपकरणहरू ठाउँमा भएपछि, Semalt कुञ्जीशब्द क्रमबद्ध छन् जहाँ दैनिक अपडेट संग AutoSEO ग्राहकहरु प्रदान गर्दछ। टोलीले अभियानको सफलताको आकलन गर्न नियमित विश्लेषणात्मक रिपोर्टहरू पनि तयार गर्दछ।
यी सबैले वेबसाइटलाई खोजी इञ्जिन स्थानान्तरण गर्न सहयोग गर्दछ AutoSEO प्रति 100 प्रति वचन दिएर। प्रतिशत प्रभावकारिता।
पूर्ण एसईओ एक कदम अगाडी छ। यसले ठूला व्यवसायहरू वा धेरै कम्पनीहरूका मानिसहरूका लागि एकीकृत एसईओ समाधान प्रदान गर्दछ। यो वेबसाइटलाई अनुकूलित गर्न केहि थोरै पैसा लगानी गर्न तयार भएकाहरूको लागि यो उत्तम विकल्प पनि हो।
पूर्ण एसईओ प्याकेज गहिरो विश्लेषणमा आधारित छ, अद्वितीय सामग्री निर्माणमा केन्द्रित साथ। उद्देश्य महत्त्वपूर्ण वेबसाइट ट्राफिक बृद्धि र Google-TOP मा एक वेबसाइट पठाउनको लागि हो।
पूर्ण एसईओको साथ, Semalt को टीमले सुनिश्चित गर्दछ कि वेबसाइट पूर्ण रूपमा SEO मापदण्डको अनुरूप छ। । यो द्वारा गरिन्छ:
कुञ्जी शब्दहरूको लागि मेटा ट्यागहरू सिर्जना गर्दै
वेबसाइट HTML कोड सुधार गर्दै
टुटेको लिंक हटाउँदै
< li> वेबसाइट इन्टरलिinking्क बढाउँदै
फुलएसईओको अन्य फाइदाहरूमा वेबसाइट विकास र मूल एसईओ-मैत्री सामग्रीको सिर्जनाको लागि Semalt बाट पूर्ण सहयोग समावेश छ।
Semalt का साथ काम गर्दै
दुबै AutoSEO र FullSEO का साथ, तपाईं प्रतिभाशाली Semalt लेखकहरू, SEO विशेषज्ञहरू र ईन्जिनियरहरूसँग तपाईंको वेबसाइटलाई अनुकूलित गर्न र SEO- सिर्जना गर्न काम गर्नुहुनेछ। मैत्री सामग्री
Semalt को टीम को अनलाइन क्षेत्र को लागी अद्वितीय सामग्री बनाउनु मा वर्षौंको अनुभव छ। लेखकहरू एसईओ उत्तम अभ्यासहरू द्वारा निर्देशित छन् र एक सही उत्पादन प्रस्तुत गर्न प्रतिबद्ध छन् जुन सबै सही बक्सहरू टिक्दछ।
नतीजा तपाईंको व्यवसायको लगानी र दीर्घकालीन विकासमा सकारात्मक फिर्ती हो।
यसैले कोरोनाभाइरसको बखत एसईओमा लगानी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
धेरै हिसाबले, भविष्य अनिश्चित हुन सक्छ, तर जब यो एक अनलाइन व्यापार बढ्दै आउँछ, एसईओ यहाँ रहनको लागि छ।